မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို သီလ႐ွင္ဝတ္ခိုင္းၿပီး တစ္ရက္ ႏွစ္ေသာင္းရေအာင္ အလွဴခံခိုင္းေနမွဳ - Uptodate MM
မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို သီလ႐ွင္ဝတ္ခိုင္းၿပီး တစ္ရက္ ႏွစ္ေသာင္းရေအာင္ အလွဴခံခိုင္းေနမွဳ
By Uptodate MMPosted on March 9, 2019
( ေပးပို႔သူ ) ယဥ္ယဥ္မိုးVIA ; April Maung Maung
၅နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးများကို သီလရှင်ဝတ်ခိုင်းကာ တရက် နှစ်သောင်းရအောင် အလှုခံခိုင်းနေမှု တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ သိစေရန် ။ ကျောက်ဆည် ခြံထဲကအပြန် ခြံထဲမှာသစ်ပင် တွေကိုရေပေးဖို့ လုပ်ရင်းမိုးတော်တော်ချုပ်နေပါပြီ ။
တံခွန်တိုင်းအဝိုင်းကိုပတ်ပြီး ၇၄လမ်း လမ်းသစ် ဖက်ကိုကွေ့ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ ၈ နှစ်အရွယ်သီလရှင် လေးတစ်ပါး ၊ ၅ နှစ်အရွယ်ခန့်သီလရှင်လေးတစ်ပါး စုစုပေါင်း နှစ်ပါး က လမ်းဘေးမှာငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်နေတာတွေ့လို့. သူတို့ကို ကျော်လာပြီးမှ ကားကို နောက်ဆုတ်ပြီး အနားရောက်တော့ ကားအောက် ကိုဆင်းပြီး ဆရာလေးတို့ ဘယ်ကျောင်းကလဲ
ဘယ်ကိုပြန်မှာလဲ ညရှစ်နာရီထိုးတော့မယ် ၊ မိုးချုပ်နေပြီ ၊ လာ ကားပေါ်တက် ဆိုပြီး ခေါ်လာတော့ လိုက်လာပါတယ် ။
ကိုယ်လည်း ခေါ်လာပြီးမှ ဘာမှန်းလည်းမသိ ကြောက် တာနဲ့ မှန်တံခါးတွေအကုန်ချပြီး ဖြေးဖြေးမောင်းရင်းနဲ့ သူတို့ကို မေးခွန်းများမေးရင်းမောင်းလာပါတယ် ။
တံခွန်တိုင် မြောက်ဥယျာဉ် ရပ်က သီလရှင် ကျောင်းကပါတဲ့ ။နမ့်စန်မြို့က လာရောက် သီလရှင်ဝတ်ရတာပါဆိုတာရယ် ၊ တစ်ရက်ကိုနှစ်သောင်းကျပ် ရအောင် အလှူခံပေး ရပါတယ်တဲ့ ။
အခု ငွေ လေးထောင်လောက်လိုလို့ မပြန်ရဲလို့ လမ်းဘေးမှာထိုင်နေရတာပါတဲ့ ။ ကားကြုံ ဆိုင်ကယ်ကြုံ လိုက်စီးရင်လဲ ရိုက်ခံရပါတယ်တဲ့ ။
ကျမကတော့ သူတို့လိုနေတဲ့ ငွေလေးထောင်ကို လှူရင်းနဲ့. ၊ ဒီလိုလူမမယ်လေးတွေရဲ့ ချွေးစက်တွေကို အခန့်သင့် စားသုံးရက်တဲ့ မြို့ကြီးပြကြီးမှာနေတဲ့ ယဉ်ကျေးဟန်ဆောင်နေတဲ့ ဓားပြတွေ ကို စက်ဆုပ်စွာနဲ့ ဒီလိုဘဝက အမြန်လွတ်ကင်းပါစေ ကလေးရယ် လို့ ရင်နာနာ နဲ့သူတို့ ကျောခိုင်းသွားတာကို အဝေး ရောက်တဲ့အထိ လှမ်းကြည့်နေရပါတော့တယ် ။
( ပေးပို့သူ ) ယဉ်ယဉ်မိုးVIA ; April Maung Maung
Posted in ျပည္တြင္းသတင္းTagged မိန္းကေလး
Previous post လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္၊ ပန္းလႈိင္ေဂါက္ကြင္းအနီးတြင္ ျပင္းထန္ေသာ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ (ရုပ္သံ)
Next post ေက်ာင္းသား မိဘတုိင္း သိိထားသင့္တဲ့ဲ ၁၂ တန္းပညာေရး စနစ္သစ္ အေၾကာင္း